Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguPage
Igumbi lestudio lanamhlanje elinesitayile esiphezulu esiguqulwe sisuka kwisitudiyo somakhi, esidityaniswe nendlu yale mihla yaphakathi kwinkulungwane. Yonwabele le ndawo ithuleyo igcwele ukukhanya kwendalo kunye nembono yeyadi yesimbo sethafa, elungele ukubukela iintaka. Thatha uhambo kwiithafa kunye namahlathi eLashbrook Park kunye neKholeji yaseSt Olaf ngaphandle kwamasango ethu. Hamba / ibhayisekile / idrayivu emfutshane ukuya ezantsi kwedolophu yaseNorthfield ukuze uthenge igrosari, iivenkile zekofu, iibreweries, iindawo zokutyela, iivenkile zeencwadi, izinto zakudala, iiboutiques, njl.
(OKWAMANDLA KULANDELA UMGAQO WOKUCOCWA WE-AIRBNB EKUPHENDULENI UMBETHE WE-CORONA VIRUS)
Siyintsapho yabantu abane kunye nezinja ezi-2. Ikhaya lethu elinomgangatho omnye liqhagamshelwe kwistudiyo ngepaseji, akukho zindonga ekwabelwana ngazo kunye nesitudiyo. Kuba sihlala sizabalazela ukushiya unyawo olukhaphukhaphu kwindawo esihlala kuyo, unokuqiniseka ukuba ukuhlala kwisitudiyo sethu kuhambelana nokusingqongileyo. Sine solar panels, sithenga isambuku/imveliso ephinda igcwaliswe/yeplastiki yasimahla yokunciphisa inkunkuma, kwaye sifaka umgquba olahliweyo wokutya. Ukuhlala nathi kuya kubandakanya: Indawo yokungena yabucala w/ibhokisi yokutshixa. Ilitye lendalo linyathela ezantsi kwi studio. Ikhitshi eligcweleyo (ifriji/ifriji, isitovu/ioveni, umenzi wekofu, itoaster, imicrowave, iti, ioyile, ityuwa kunye nepepile). Itafile yokutyela yemabhile. Indawo yokuhlala enesofa yecandelo, isitulo sengalo, itafile yekofu. Ibhedi yokumkanikazi. Igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa. Idesika. Igumbi lokulala/idrowa ekhoyo. Ukuqokelelwa kwezinto zokufunda kunye nemidlalo. Ukufikelela kwindawo yeyadi w/deck. Udonga lweefestile ezijonge ngasentla, iimfama kunye namakhethini abucala. I-wifi yasimahla. Ubushushu/AC.
4.95 ·Izimvo eziyi-87
Amathafa kunye namahlathi yeyona nto siyithandayo kwindawo esihlala kuyo. Siyathanda ukuthatha uhambo apho nezinja zethu kuwo onke amaxesha onyaka, sijonge ukutshintsha kwezityalo nezilwanyana ezizizisayo. Enye into oyithandayo ngeNorthfield: iifama ezincinci kunye namafama azo amangalisayo! Kuninzi u-U-khetha ukonwabela ukubakho xa ixesha lequnube. Into yesithathu esiyithandayo: sinemizila emininzi, i-cider, kunye ne-distillery. Sicele iingcebiso malunga nendawo omawuye kuyo ngexesha lokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Page
Siyathanda ukudibana neendwendwe zethu kodwa ukungena kwakho okwahlukileyo kuya kuvumela ukuhlala kwakho kube ngasese njengoko unqwenela. Iyafumaneka ukuze ufowunelwe ngefowuni/umbhalo phakathi kwentsimbi yesi-8am neyesi-8 pm. Qhagamshelana ngaphandle kwezo yure zongxamiseko kuphela.
Siyathanda ukudibana neendwendwe zethu kodwa ukungena kwakho okwahlukileyo kuya kuvumela ukuhlala kwakho kube ngasese njengoko unqwenela. Iyafumaneka ukuze ufowunelwe ngefowuni/umb…